रातिमा कोरोना लाग्नुका दुई कारण | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार रातिमा कोरोना लाग्नुका दुई कारण
रातिमा कोरोना लाग्नुका दुई कारण
२०७८, ३० श्रावण शनिबार १२:०६
अस्तिसम्म नेपालमा दिन र रात, आठै प्रहर, चौसट्ठी घडी जगजगी मच्चाइरहेको कोरोना अब तीन घडी अथवा नौ घण्टा मात्रै जागा हुन थालेको छ । त्यो पनि रात्रिको पहिलो प्रहरमा सुरु हुनेवाला छ । त्यसैले, अब कोरोनाको डर दिनमा शून्य, साँझमा हल्का र रातमा गाढा हुन थालेको छ, त्यो पनि गाडीमा । राति ८ बजेपछि गाडी चलाउँदा कोरोना लाग्छ भन्ने नयाँ तथ्य काठमाण्डौका तीन जिल्लाका सीडीओहरुले पत्ता लगाएका हुन् । निषेधाज्ञाको म्याद थप्ने बानी परेका सीडीओहरुले रातमा गाडी चढ्दा कोरोना लाग्छ भन्ने नयाँ खुलासा शतप्रतिशत तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ । यसलाई पुष्टि गर्न दुईटा सत्यलाई मात्र हेर्दा पुग्छ ।
पहिलो सत्य हो खोप नलगाउने मान्छे अब कमै छन् । सरकारले निर्धारण गरेको उमेर र लक्षित समूह बाँकी भए पनि त्यस इतरका मानिसले खोप लगाएर फेसबुकतिर फोटो टाँस्न भ्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको नातागोता, सोर्सफोर्स लगाएपछि खोप हिजोआज सजिलै पाइन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले कतिपयलाई त घर र होटलमै पुगेर खोप लगाएका छन् । भुइँचालो जाँदा टिनका पाता र कम्बल समेत सोर्सफोर्स र भनसुनमा पाइने देशमा जाबो खोप पाउनु नयाँ र नौलो कुरा पनि भएन । जे होस् बाटोघाटोमा अब खोप नलगाउनेभन्दा लगाउने बढी भेटिन्छन् । त्यसमाथि केही महिनामा सबैलाई खोप दिने भनेर सरकारले हल्ला गरिसकेको छ । सबैलाई पुग्ने खोप आउने, नआउने आफ्नो ठाउँमा छ । तर हल्ला त भइसक्यो नि । यो हल्ला कोरोनाले पनि सुनिसक्यो ।
त्यसो त खोप लगाएको मान्छेसँग कोरोना यसै डराउँछ । अझ फेसबुकमा खोप लगाएको कार्ड र फोटो देखियो भने त कोरोना एक कोश परैबाट खुलेलम ठोक्छ । खोप लगाएको पाखुरा देखाउनेहरुसँग तर्सन्छ । खोप कार्ड, पाखुरा र खोप लगाएँ भन्ने मान्छेहरु देख्ने र सुन्नेबित्तिकै कोरोना बेहोस हुन्छ । बेहोस भएको कोरोनालाई होसमा ल्याउन अर्को कोरोनाले पानी छ्याप्यो भने पनि झुक्किएर स्यानिटाइजर छ्याप्न पुग्छ । त्यो स्यानिटाइजरले बेहोस भएको र होसमा ल्याउन खोज्ने दुवैथरी कोरोनालाई कहिल्यै नउठ्नेगरि चिर निद्रामा पुर्याउँछ अर्थात कोरोना मर्छ ।
तपाईँ हामीलाई थाहै छ मरेपछि भूत हुन्छ । भूत दिउँसो भन्दा राति सक्रिय हुन्छ । मान्छेको भीडभाडमा च्यापिएर, खोप कार्ड र पाखुरामा खोप लगाएको डोब हेरेर तथा स्यानिटाइजर सुँघेर मरेको कोरोना पनि भूत भएर राति सडकमा निस्कन सक्छ । उसै त कोरोना, त्यसमाथि भूत ! जिउँदो कोरोनाले भन्दा मरेको भूत कोरोनाले बढी दुःख दिन सक्छ । भूत कोरोनाले राति सडकमा ताण्डव नाच देखाउन सक्छ । गाडीको बत्तीमा टाँसिएर र राँके भूत बनेर गाडीवाला र यात्रुलाई झम्टन सक्छ । भूत आउँछ रे भन्ने सुन्दा मात्रै त सातो जाने नेपालीलाई कोरोने भूतले नै आक्रमण गर्यो भने के हाल होला ! त्यसैले कोरोनाको भूतबाट जोगाउन काठमाण्डौमा राति गाडी नचलाउन सरकारले भनेको हो ।
राति कोरोना लाग्ने दोस्रो कारण झन् बढी तथ्यमा आधारित छ । ओली बा बाल्कोटमा र देउ बा बालुवाटारमा पुगेपछि कुलमान पनि बिजुली अड्डामा पुगेका छन् । कुलमान बिजुली अड्डामा पुग्नु भनेको अन्धकार सधैंका लागि अन्त्य हुनु हो । केही महिना कुलमान नहुँदा सुरु भएको रातिको अँध्यारो बाँकी नै छ । बिजुलीका खम्बामा बल्ने सडक बत्तीले रातिको अँध्यारो हटाउन सकेको छैन ।
अब कुलमान आए । अँध्यारो हटेर रात पनि दिनजस्तै हुन्छ । रात दिनजस्तो हुनु भनेको रातमा पनि चहलपहल बढ्नु हो । कोरोना रातमा झन् बढी सक्रिय हुनु हो । त्यसैले कुलमान बिजुली अड्डामा पुगेपछि कोरोनाले रातलाई पनि दिनजस्तै ठानेर सक्रिय हुने भयो । रातमा रमाएर हिँड्नेहरुलाई कोरोनाले झम्टने भयो । कोरोना सक्रिय हुन सक्ने भविष्यवाणी गरेरै काठमाण्डौका सीडीओहरुले राति गाडी चलाउन नदिने बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गरेका हुन् ।
राति रेष्टुरेन्ट धाएर टन्न बिजुलीपानी पिउने बानी भएकाहरुलाई मेरो कुरा कति पत्यार लाग्यो कुन्नि ? पत्यार लागेन भने एकपटक ऐना हेर्नुहोस् । हिजोआज त मोबाइलमै पनि ऐना हेर्न मिल्छ । ऐनामा पक्कै देख्नुभयो होला तपाईंको मास्कले राम्रोसँग नाक नै छोपेको छैन । नाक छोप्यो भने त बर्बाद हुन्छ, बरु नाक छोप्नुपर्छ भन्नेहरुका अर्ति उपदेश सुन्ने कान नै छोप्नु बेस भनेर धेरैले मास्क कानमा पनि लगाउने गर्छन् । चिउँडोमा कोरोना ठोक्किने डरले मुखभन्दा तल पनि मास्क झुण्ड्याउँछन् । तपाईंलाई पनि यही बानी लागेको होला । अनि काम नभए पनि सडकमा लखरलखर हिँडेर निस्केको पसिना पनि अनुहारमा बाँकी नै होला । अब थाहा पाउनुभयो होला नि कोरोनालाई भुसुनो जति पनि नठान्ने तपाईंको कारण पनि सरकारलाई उडन्ते निर्णय गर्ने बानी परेको छ ।
Previous articleनिषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई आधा घण्टा सडकमा होल्ड !
Next articleभाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थाले